कोरोनाको भ्याक्सिन पत्ता लगाउन 'ज्याक मा' ले दिए १४ मिलियन डलर, को हुन् उनी ? — Arthatantra.com
Arthatantra.com > कोरोना > कोरोनाको भ्याक्सिन पत्ता लगाउन ‘ज्याक मा’ ले दिए १४ मिलियन डलर, को हुन् उनी ?
काठमाडौं । विश्वका धनीहरुको सूचीमा पर्ने व्यक्तिहरुले कोरोनाभाइरसको नियन्त्रणमा के कस्ता सहयोग गरिरहेका छन् त भन्ने सन्दर्भमा कुराहरु उठिरहेका छन् ।
अरबपतिहरुको सूचिमा पर्ने व्यक्तिहरु मध्ये एक हुन् ज्याक मा । उनी विश्वको सबैभन्दा ठूलो ई- वाणिज्य व्यवसायहरू मध्ये एक अलिबाबा समुहका संस्थापक हुन् ।
उनी चीनका दोस्रो धनी व्यक्तिमा सूचिकृत छन् । उनी २०१९ मा चीनका धनीहरुको सूचीमा १ नम्बरमा परेका व्यक्ति समेत हुन् । साथै अरबपतिहरुको सूचिमा २१ औं नम्बरमा परेका उनी २०१८ मा शक्तिशाली व्यक्तिहरुको सूचिमा पनि २१ औं नम्बरमा नै परेका थिए ।
साथै टेक २०१७ मा सबभन्दा धनीको सातौं नम्बरमा उनी थिए । ५५ वर्षिय मा को आम्दानीको स्रोत आफ्रनै इ वाणीज्य व्यापार नै हो । बिबाहित चिनियाँ नागरिक मा ले आर्टस् र साइन्समा स्नातक सम्मको अध्ययन गरेका छन् । पहिले एक अंग्रेजी शिक्षक समेत रहेका ज्याक माले ज्याक फाउण्डेशनाको स्थापना गरी विभिन्न कार्यहरु गर्दै आएका छन् ।
उनले कोराना भाइरसको भ्याक्सिन पत्ता लगाउने प्रक्रियाका लागि १४ मिलियन डलर सहयोग गरेका छन् । साथै उनले शुक्रबार सम्ममा ५ लाख डलर , परिक्षण किट र लाखौं फेस माक्स् वितरण गर्ने जनाएका छन् ।
यसै बिचमा उनले युरोपियन मुलकमा सहयोग गरिरहेका छन् । फाउण्डेसन मार्फत कोरोना भाइरसको प्रकोपबाट बचाउन उनले एशियाली मुलुकहरुलाई सहयोग गरेका छन् । २०१९ सेप्टेम्बरमा मा ले अलिबाबा समुहको अध्यक्ष पद छाडे सँगै डेनियल झा यस समुहको अध्यक्ष रहेका छन् ।
अलिबाबा समुहका अलावा चिनियाँ मनोरन्जन उद्योग, सामुहिक लगानी कोष लगायतमा उनको उल्लेख्य लगानी रहेको छ ।
२०७६ चैत्र ९ गते १४:२७ मा प्रकाशित
#कोरोना भाइरसज्याक मा
भोलिदेखि लामो दूरीका सार्वजनिक यातायात बन्द, निजी सवारीलाई नरोक्ने
कोरोना प्रभाव : बिजुलीको बिल तिर्न ढिलो भए जरिवाना नलाग्ने
सेयर बजारमा आज चार कम्पनीले गरे मूल्य समायोजन, हेर्नुहोस् एक कित्ता सेयरको कति ?
अब बिदेशबाट फोन आउँदा पनि बोनस पाईने !
योजनावद्ध विकास नगरे गन्तव्यमा पुग्न नसकिने : प्रधानमन्त्री ओली